ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဂျာမနီ ဒေါ်လာ ၄ သန်းခွဲလှူ
၂၅ ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀
ကုတုပလောင် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များ ထောက်ပံ့ရိက္ခတွေကို စောင့်ယူနေ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ Cox’s Bazar မှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ အိမ်ရှင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့အတွက် အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးချဖို့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကတဆင့် ဂျာမနီနိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းခွဲ လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း WFP က ကြေညာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ အဓမ္မ နေရပ်ရွေ့ပြောင်းခံခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ အိမ်ရှင် Cox’s Bazar ဒေသတွင်းက လူမှုအသိုင်းဝိုင်းတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ အလှူငွေတွေကို ပေးအပ်လိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလို ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့ကာလနဲ့ မိုးရာသီအချိန်တွေမှာ အသက်ကယ်နိုင်မယ့် အကူအညီတွေဟာ အင်မတန် အရေးပါကြောင်း၊ ဒီ အကြောင်းအရာ ၂ ခုစလုံးဟာ အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး ၀န်ကြီးဌာအတွင်းဝန် Md. Mohsin က ပြောပါတယ်။
ဒီအကူအညီကိုတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆိုင်ရာ ဂျာမန်သံအမတ်ကြီးကတဆင့် ပေးအပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျမန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးရုံးကတဆင့် ပေးအပ်တဲ့ ဒီအကူအညီတွေထဲက တချို့ကို စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေအကြား ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရေးအတွက်လည်း သုံးစွဲသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခ စတင်တဲ့အချိန်ကစလို့ အခုပေးအပ်တဲ့ အလှူငွေအပါအ၀င် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာရှိတဲ့ WFP ရုံးကို ဂျာမနီက စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို မြန်မာအစိုးရကတော့ လက်မခံပါဘူး။
ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှအေတှကျ ဂြာမနီ ဒျေါလာ ၄ သနျးခှဲလှူ
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ၊ Cox’s Bazar မှာ ရှိနတေဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှနေဲ့ အိမျရှငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံတို့အတှကျ အရေးပါတဲ့နရောတှမှော အသုံးခဖြို့ WFP ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာအဖှဲ့ကတဆငျ့ ဂြာမနီနိုငျငံက အမရေိကနျဒျေါလာ ၄ သနျးခှဲ လှူဒါနျးလိုကျကွောငျး WFP က ကွညောပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံကနေ အဓမ်မ နရေပျရှပွေ့ောငျးခံခဲ့ရတဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှနေဲ့ အိမျရှငျ Cox’s Bazar ဒသေတှငျးက လူမှုအသိုငျးဝိုငျးတို့အတှကျ လိုအပျတဲ့နရောတှမှော ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရ အသုံးပွုနိုငျဖို့အတှကျ ဒီ အလှူငှတှေကေို ပေးအပျလိုကျတာလို့ ဆိုပါတယျ။ အခုလို ကပျရောဂါ ဖွဈနတေဲ့ကာလနဲ့ မိုးရာသီအခြိနျတှမှော အသကျကယျနိုငျမယျ့ အကူအညီတှဟော အငျမတနျ အရေးပါကွောငျး၊ ဒီ အကွောငျးအရာ ၂ ခုစလုံးဟာ အကူအညီလိုအပျနသေူတှအေတှကျ ကွီးမားတဲ့အန်တရာယျဖွဈကွောငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အရေးပျေါကယျဆယျရေးနဲ့ စီမံခနျ့ခှဲရေး ဝနျကွီးဌာအတှငျးဝနျ Md. Mohsin က ပွောပါတယျ။
ဒီအကူအညီကိုတော့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဆိုငျရာ ဂြာမနျသံအမတျကွီးကတဆငျ့ ပေးအပျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဂမြနျအစိုးရ နိုငျငံခွားရေးရုံးကတဆငျ့ ပေးအပျတဲ့ ဒီအကူအညီတှထေဲက တခြို့ကို စာနာမှုဆိုငျရာ အကူအညီပေးနတေဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးတှအေကွား ဆကျသှယျရေးစနဈ ကောငျးမှနျလာအောငျ လုပျဆောငျရေးအတှကျလညျး သုံးစှဲသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ ရိုဟငျဂြာပဋိပက်ခ စတငျတဲ့အခြိနျကစလို့ အခုပေးအပျတဲ့ အလှူငှအေပါအဝငျ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှအေတှကျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့မှာရှိတဲ့ WFP ရုံးကို ဂြာမနီက စုစုပေါငျး ဒျေါလာ သနျး ၃၀ လှူဒါနျးခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ရိုဟငျဂြာဆိုတဲ့အသုံးအနှုနျးကို မွနျမာအစိုးရကတော့ လကျမခံပါဘူး။
ပြစ်ဒဏ်ကျခံ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကြိမ်ဒဏ်မပေးဖို့ မလေးရှားအထက်တရားရုံးဆုံးဖြတ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရေကြီး မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်
ဘာဆန်ချာကျွန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ စခန်းထဲပြန်ရွှေ့ပေးဖို့ HRW တောင်းဆို
Bhashan Char ကျွန်းပေါ်က ဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာပြည်ပြန်မှ ထွက်ခွင့်ပြုမယ် - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်